Kevin De Bruyne Oo Xalay Dhaawac Soo Gaadhay, Kulamada Uu Maqnaan Karo Iyo Guushii Manchester City Ay Ka Gaadhay Fulham – Cadalool.com
Kevin De Bruyne Oo Xalay Dhaawac Soo Gaadhay, Kulamada Uu Maqnaan Karo Iyo Guushii Manchester City Ay Ka Gaadhay Fulham
Laacibka khadka dhexe uga ciyaara kooxda Manchester City ee Kevin de Bruyne ayaa dhaawac kasoo gaadhay ciyaartii xalay ay kooxdiisu kaga adkaatay Fulham wareegga siddeed dhamaadka tartanka Carabao Cup.
Laba gool uu Manchester City u dhaliyey da’yarka reer Spain ee Brahim Diaz ayaa ka caawiyey inay ka mid noqoto siddeedda kooxood ee iskugu soo hadhay Carabao Cup, waxaanay sugi doontaa Leicester City iyo Southampton oo dhamaadka bishan ciyaari doona midkooda soo guuleysta. Laakiin ciyaartan ayaa waxa guusha qariyey dhaawac soo gaadhay halyeyga khadka dhexe ee Kevin de Bruyne oo garoonka laga saaray saddex daqiiqadood ka hor intii aanay dhamaanin.
27 jirkan reer Belgium oo kulankiisii labaad lagu bilaabay xili ciyaareedkan oo intii hore uu dhaawac kaga maqnaa dhaawac jilibka ahaa, hase yeeshee waxa xalayna uu wax ka noqday jilibka lugta bidix, kaas oo sababay inuu ciyaarta sii wadan kari waayo.
Tababare Pep Guardiola oo warbaahinta la hadlay ciyaarta kaddib ayaa waxa uu sheegay in dhakhaatiirtu ay qiimaynayaan xaaladdiisa, waqtigana aanay garan karin sida uu halis u yahay.
Guardiola ayaa toban isbeddel ku sameeyey kooxdiisii Isniintii la ciyaartay Tottenham, laakiin waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed cajiib ah oo ay dhinac walba kaga yimaaddeen Fulham iyaga oo goolka toogtay 27 jeer.
Diaz ayaa daqiiqaddii 18aad goolka guusha u keenay City isaga oo la kulmay kubbad uu goolka ku toogtay Vincent Kompany oo kasoo boodday Sergio Rico.
Goolka labaad ayaa uu Diaz hoggaanka ciyaarta ugu sii dheereeyey daqiiqaddii 65aad isaga oo ka faa’iidaystay toogasho uu goolka la beegsaday Gabriel Jesus oo kasoo noqotay birta, waxaana 19 jirkani uu sidaas ugu soo saaray kooxdiisa wareegga siddeed dhamaadka.
City ayaa sugaysa midka soo baxa Leicester City iyo Southampton oo ciyaartooda dib loogu dhigay 27 November kaddib shilkii diyaaradda ee uu ku dhintay mulkiilihii Foxes.
Miyuu nuglaaday Kevin de Bruyne?
De Bruyne oo lagu tilmaamo ciyaartoyga ugu muhiimsan Manchester City ayaa xili ciyaareedkan waxa garoomada ka xayiray dhaawac, waxaana isku geyn kulamadii naadigiisa oo dhan uu ciyaaray 150 daqiiqadood oo kaliya, kulankii xalayna waxa uu soo bandhigay ciyaar wanaagsan oo uu ugu muujiyey jamaahiirta inuu yahay laacib ay u baahan yihiin.
Khabiirka ciyaaraha u falanqeeya BBC Radio 5 Live ee Pat Kevin ayaa markii De Bruyne la saaray waxa uu sheegay in City uu ka baxay ciyaartoy aasaasi ah.
Bishan November ayaa waxa Manchester City kusoo fool leh shan ciyaarood oo ay ku jirto kulanka ay 11 November u iman doonto Manchester United.
Inkasta oo aan weli war rasmi ah laga soo saarin xaaladdiisa, haddana warar hor dhac ah ayaa waxay tibaaxayaan inay suurtogal tahay in labada kulan ee Southampton iyo Manchester United oo horyaalka Premier League ah iyo ciyaarta Champions League ee Shakhtar Donetski uu seegi doono.
Si kastaba ha ahaatee dhaawacan cusub ee De Bruyne ayaa waxa uu keenay shaki ah in ciyaartoyga ay dhaawacyadan soo noqnoqday hoos u dhac ku keenaan xirfaddiisa wanaagsan iyo inuu mar walba halis u ahaado in mar kale ay laba kacleeyaan haddii jug kale kasoo gaadho halkii uu hore wax uga noqday.